Apple zvakare inotyora rekodhi yayo: 78,3 mamirioni maPhones akatengeswa | IPhone nhau
Apple nhasi yanga iine musangano waive wakonzera tarisiro huru, sezvo yaizopa mhedzisiro yemari yekota yakakosha yegore, iyo yaitangira kupera kwaGunyana kusvika Zvita 31, 2016. Mumwedzi mishoma inopfuura mitatu ivo dzinotengeswa maPhones matsva, achangobva kuvhurwa, uyezve kune dzakasimba nguva dzekutengesa dzegore, ese Matema Chishanu uye zororo reKisimusi. Runyerekupe pamusoro pekutengesa kwakashata kweiyo "inoshungurudza iPhone 7" inopa nzira kuchokwadi: Apple yatengesa maPhones akawanda mukota ino kupfuura mune chero imwe munhoroondo yayo, iine mamirioni 78,3 mamirioni akatengeswa, ichityora rekodhi yeiyo iPhone 6s, iyo yakatorova zvakapusa iPhone 6. $ 78.400 bhiriyoni mumari, 13,1 mamirioni iPads akatengesa uye 5,4 mamirioni maMac kwekota iyo zvakare inoisa kambani kumusoro.
Gadzira machati echikamu
Iyo iPhone 7 nokudaro inoratidza kuti zvese zvataurwa kusvika parizvino zvave kungofungidzira izvo zvakange zvine zvishoma kana zvisina chekuita nezvechokwadi. Runyerekupe pamusoro pekumiswa kwekugadzirwa, kutambirwa kwakashomeka kwemisika nekuda kwekufungidzirwa kwayo kushoma zvigadzirwa uye kuenderera dhizaini, kuzadza kwemisika ye smartphone uye yavo ramangwana diki ... Zvese izvo mapepa akafa ane marekodhi aya. Asi zvakare pane yakaipa protagonist: iyo iPad. Hwendefa reApple haringotadzi kukurira chete asi rinoenderera nekudonha kwaro kusingamise uye rinosara nemamiriyoni gumi nematatu chete ezvikamu zvakatengeswa, zviverengero zvingafarirwa nevazhinji asi zviri kure nemamirioni makumi maviri nematanhatu akatengeswa munguva imwechete ya13,1..
Nekudaro, Apple makomputa uye kunyangwe hazvo iyo yekusava netariro yakati kudzoreredzwa kushoma kwakaitika muna2016 pamwe nezvinetso zveMacBook Pro nyowani zvaizoyera kutengesa, vakakwanisa kugadzirisa manhamba egore rapfuura, vachisara vari 5,4 mamirioni mayuniti akatengeswa. Nezvose izvi, Apple inoona kuti mari kubva ku iPhone, Mac, Services uye Apple Watch ndidzo dzave dzakakwirira kwazvo munhoroondo yayo.
Pamusoro peiyo data rehupfumi, Tim Cook akapawo zvimwe zvakawanda, senge izvo kunyangwe hazvo iyo iPhone 7 yave iri chinhu chakakurumbira, kudiwa kweiyo iPhone 7 Plus kwave kwakakwirira zvekuti havana kukwanisa kuifukidza mukati mekota iyoyo., zvichikonzera kunonoka mukutengesa uye kutengesa zvishandiso zvishoma pane zvavaigona dai vaine kugadzirwa kwakaringana. Mari yebasa, inosanganisira iCloud neApple Music maakaunzi, inoramba ichikura zvishoma, ichisvika $ 7.170 bhiriyoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Apple zvakare inoputsa rekodhi yayo: 78,3 mamirioni ePhones akatengeswa
Apple inogona kupedzisa 32-bit maapps muIOS 11